INkosana Encane, inoveli yaphakade okungekho muntu ongakhohlwa ukuyifunda | Izincwadi Zamanje
INkosana Encane, inoveli yaphakade okungekho muntu ongakhohlwa ukuyifunda
UDiana Millan | | Amabhuku, Izincwadi Zentsha
"INkosana encane" ingenye yezincwadi okufanele wonke umuntu azifunde. Futhi, le yincwadi okufanele ifundwe okungenani kabili, kanye njengezingane futhi kanye njengabantu abadala. Ukukhathazeka kwalo mlingiswa othandekayo kwenza le noveli emfushane ifundwe igcwele imizwa, sidonsa imizwa lapho besingacabangi ukuthi sinayo.
Singakhuluma ngobuchwepheshe. Njengoba kuyincwadi yamanoveli edume kakhulu ebhalwe ngu-Antoine de Saint-Exupéry, eyabhalwa ngesikhathi sokudingiswa kombhali e-United States, eyashicilelwa okokuqala ngo-1946 nguReynal & Hitchcock. Kepha le ncwadi ayifanele ukukhuluma ngayo kanjalo. Kufanelwe ukuphathwa ngothando.
INkosana encane ngumntwana ovela ku-asteroid B 6212 okuthi, kusuka kwiplanethi kuya kwiplanethi, ahlangane nezinhlamvu ezikhetheke kakhulu aze afike emhlabeni. Maphakathi noGwadule lwaseSahara, umfanyana uhlangana nendiza elahlekile ngubani okuthile okudlula lokho esikwaziyo njengobungani kuzobahlanganisa.
Emqondweni wengane, kuseyinganekwane elandisa indaba yezigemegeme zenye ingane. Konke kunomlingo kakhulu futhi kuyinganekwane. Kepha lapho sikhula futhi siba "ngabantu ababucayi" bekhuluma "ngezinto ezibucayi," akulimazi uthuli leya ncwadi, esasiyikhohliwe eminyakeni eyedlule, bese siyibuka. Futhi kubonakala kumangalisa ukuthi incwadi emincanyana kangaka, enemidwebo futhi ifundeka kalula kangaka, ingaguqula kanjani umbono wethu wempilo engxenyeni nje yehora.
Akuyona enye yezincwadi ezithengisa kakhulu kunawo wonke ngoba. Futhi ayifundwa kakhulu eFrance ngoba umbhali wayo kwakunguFulentshi. Isizathu sokuthi kungani "iNkosana Encane" ibe futhi izoba okuhamba phambili kuze kube ngunaphakade kanje: Kuyindlela yobungani, uthando, inhlonipho kanye nomuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo.
Indaba yalowo mfana ongalokothi awuyeke umbuzo asewubuzile kodwa, nokho, ongakaze anikeze izimpendulo. Ingane eyayithanda imbali yayo ngaphezu kwanoma iyiphi enye, ngoba yayingeyayo, ngoba yayiyinisela, iyivikela emoyeni, yayithanda yize yayikuthanda. Ingane engakuqondi ukukhathazeka kwabantu abadala ngoba ayinazo izimiso eziyisisekelo.
Ngakho-ke lapho uzizwa ungekho endaweni, lapho konke kukukhathaza, lapho impilo iba yinto ekhathazayo njalo, thatha incwadi bese ukhipha intukuthelo nosizi oluthwele ngaphakathi.
Le akuyona incwadi enhle kakhulu ongayinikeza, kepha futhi nesipho esihle kakhulu ozozinikeza sona.
Uma ungenayo le ncwadi, ungaphuthelwa ezinye imishwana yenkosana encane okuphawuleka kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izincwadi Zentsha » INkosana Encane, inoveli yaphakade okungekho muntu ongakhohlwa ukuyifunda
Kuyinoveli engingasoze ngayikhohlwa ngenxa yezimfundiso eziholela ekungeniseni ngaphakathi imizwa ebekelwe eyodwa.
UGabriel García Márquez nombala ophuzi
Okungaziwa kakhulu emhlabeni wezincwadi